VKONTAKTE များအတွက် VKFOX PLUGIN ကို - BROWSER ကိုတိုးချဲ့ - 2019
Skype ကို ဒါဟာမှန်ကန်စွာတစ်ဒဏ္ဍာရီ program ကိုခေါ်တော်မူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလုံးဝနေရာတိုင်းလျှောက်ထားခဲ့ပြီး - Skype ကို၏အကူအညီကိုကမ္ဘာ့လူဦးခဲ့ကြကြောင်းလည်းအများစုဆက်သွယ်နှင့်အတူ, စီးပွားရေးလူများ, ကျောင်းသားများ, ဂိမ်းကစား၏ဘဝနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအဆက်မပြတ် updated အသစ် features တွေထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အဟောင်း optimized နေကြသည်။ သို့သျောလညျးကိုအတူတကွထုတ်ကုန်တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ထားသောပြင်ဆင်ချက်နဲ့အတူနေတဲ့အလေးချိန်နဲ့ installation ဖိုင်ထဲမှာသိသိသာသာတိုး, ပွင့်လင်းအချိန်က "ဟာ့ဒ်ဝဲ" ပေါ်တွင်တိုးပွားလာတောင်းဆိုချက်တွေ, ထို operating system ကိုအစိတ်အပိုင်းများလည်းရှိသေး၏။ အဟောင်းတွေစက်တွေမရှိတော့ Skype ကိုသစ်ဗားရှင်းနဲ့အတူထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်, ဒါကြောင့်သင်တည်ဆဲပြိုင်ဘက်ရန်အခြားနည်းလမ်းရှာရန်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ဧရာဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတွက်လုံးဝနေသောလူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ, ငါးပေးထားပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးထဲကနေအဆိုးဆုံး Rushen မှအဆင့်, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်, ဒီထိုက်တန်အစားထိုး၏ပုံမှန်စာရင်းမပေးကြောင်းသတိပြုသင့်ပေသည်။
ကွန်ရက်ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုမှာ။ ကအလားတူစွမ်းရည်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့အလုံအလောက်ပြိုင်ဘက် Skype ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဖိုင်ကိုအပ်လုဒ်ကို, စတစ်ကာများ, ရုပ်ပြောင်များနှင့်အခြားအရာနှင့်စာသားကို mode မှာရာအရပ်ကိုကြာ, နှင့်ဗီဒီယို mode မှာ။ Layvchaty အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခမဲ့စတစ်ကာများနှင့်အပြုံးပုံ, စာဝှက်စနစ်, စာသား chat နဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပမာဏနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ - မဟုတ်လစာနှင့်ကြေးပေးသွင်း၏တစ်ခုတည်းသောဒြပ်စင် - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို Skype ကိုအတူ ICQ တန်းတူကိုထည့်လေ့မရှိ, တခါတရံတောင်ထက်မလွန်။
ဤအစီအစဉ်အကြောင်းသူမဝေး ICQ ၏ကျော်ကြားမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကြား၏။ တူညီသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ (သို့သော်ရုပ်ပြောင်တာဆင်းရဲတဲ့စာရင်းနှင့်အတူ), အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက, ဤလျှောက်လွှာကိုအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့စေ့စပ်အသုံးပြုကြသည်ကြောင်းနည်းပညာများဒါနီးပါး4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပေါရာဏဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကိုလည်းတပ်မက်လိုချင်သောအခံရဖို့အများကြီးထွက်ခွာမည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကအတိအကျဒီအထူးသဖြင့် "အဟောင်းကိုကျောင်းက" လိမ့်မည်နှင့်လှပသောလွမ်းဆွတ်မှုအနည်းဆုံးတစ်အသိပရိုဂရမ်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်။
က Skype ကိုလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုအေးဂျင့်တွင်ပထမဦးဆုံးအရှည်လျားကြား၏။ သူကဘရောက်ဇာဗားရှင်းဆဲရရှိနိုင်ခဲ့ - ပြီးတော့ဘာမျှမ login မှအတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ခဲ့ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်နေဆဲမခံမရပ်ပါဘူး - နှင့်အေးဂျင့်ကသူတို့စွမ်းရည်အတွက်သိသိသာသာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အခုတော့နဲ့ audio / Video call, file တွေကိုပေးပို့ဖို့အပြုံးပုံနှင့်အတူလဲလှယ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်။ ငါ့ကမ္ဘာနှင့် Meil.ru. ၏ဂိမ်းကနေသီချင်းနားထောင်နေတဲ့အခကြေးငွေများအတွက်ပုံမှန်ဖုန်းများမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာအသုံးပြုသူနှင့် "ICQ" နှင့် VKontakte နှင့် Odnoklassniki ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည် - ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးအာရုံစိုက်ထိုက်တန်ပါတယ်။
Mail.ru အေးဂျင့်ကို Download လုပ်ပါ
မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့စီမံကိန်းကိုအင်တာနက်ရေဒီယို။ တိုတောင်းသောအသံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျ - မပါစာသားမ messaging နှင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုဆက်သွယ်ရေးပစ္စုပ္ပန်ရေဒီယိုအတွက်ရာအရပ်ကိုကြာ, ရှိပါတယ်။ တူညီသောအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအသံဖြင့်ချက်တင် - နည်းပညာအင်တာနက်ကိုဒါခေါ် "အခန်း" သို့ခွဲခြားခဲ့သည်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်တည်ဆောက်ထားသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူး, လျော့နည်းအသွားအလာ, အသေးစားအရွယ်အစား, Cross-platform နှင့်ဘာမှမများအတွက်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း - ဤအရာကအနည်းဆုံးမဟုတ်လုံးဝနိုင်ပေမယ့်ဒါပြောဆိုရန် Skype ကိုတစ်ဦး stripped-down အခြားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ Zello ၏အဓိကအားသာချက်များရှိပါသည် ...
ဒါကြောင့်အသံနှင့် video conferencing ဖနျတီးနိုငျသောကွောငျ့ Skype ကိုအကြောင်း, ကအုပ်စုချတ်ဖြစ်ပါသည်, အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဤသည် multiplayer ဂိမ်းထဲမှာဂိမ်းကစားသဖြင့်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ပိုပြီးလူများကဂိမ်းတစ်ခုသိမ်းပိုက်သင့်ကြောင်းအာကာသ၎င်းပြင်, Skype ကိုစားသုံးပိုအရင်းအမြစ်များ, အုပ်စု၌ရှိကြ၏။ ဒီချို့ယွင်းချက်ကိုဖြေရှင်းရန် RaidCall တီထွင် - အုပ်စုတစ်စုဗီဒီယိုနှင့်အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းကွန်ပျူတာ၏အရေးကြီးသောစွမ်းဆောင်မှုနေသောသူတို့အဘို့အသံချတ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျကျကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုမပယ်မရှားပါဘူး, ဤဂိမ်းကစားကြားတွင်ရေပန်းစားရယူလိုက်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်စဉ်းစားဟန်ဒီဇိုင်းကိုဒီထုတ်ကုန် gamers တွေအတွက်အကောင်းဆုံး analogue Skype ကိုလုပ်ရမည်။
RaidCall အစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
ဤဆောင်းပါး၌ငါလူကြိုက်အများဆုံး Analogues Skype ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပါပြီ။ သူတို့ကမူဝါဒသို့မဟုတ် Skype ကိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုကိုပြောင်းလဲပေးရန်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်သောသူတို့က, သို့မဟုတ်မလိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုအတွက်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတန်းတူအပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းအနည်းငယ်လျော့နည်းလူကြိုက်များအစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးလုံလောက်သောငွေပမာဏရှိကွောငျးကိုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။